Anyị Wee na Advanced-technology
The Best irè-ọrụ
elekwasị anya na àgwà
Now Hay Baler RXYK-0850
Hay zaa Aka
Hay Tedder Ma zaa
"WEIFANG HUALAND ígwè CO., LTD" malitere ahia mba ofesi na 2004. Mbụ ngwaahịa akara bụ n'ihu ọgwụgwụ Loader na backhoe maka traktọ. Na 2006 Huamachinery emepe PTO osisi chipper na dizel osisi chipper.Both na-ọma resịrị ndị world.other traktọ Mgbakwụnye e mepụtara, dị ka, imecha mower, slasher, okporo ụzọ sweeper, snowblower.In 2010 Huamachinery OEM ụzọ ewu ígwè na-brazil.And ugbu a Huamachinery nwere 5 nhazi noo, 3 nzukọ noo, 1 elu ọgwụgwọ ogbako, 2 okokụre ngwaahịa nkwakọba, 2 akụkụ nkwakọba, 1showroom; 3 ngwaahịa e: haying igwe woodworking igwe 3PT Mgbakwụnye maka traktọ-n'ihu ọgwụgwụ Loader, backhoe, snow ikuku mmiri, okporo ụzọ sweeper na wdg 100 ọrụ na 6 injinia ...
Hay baler na cutter 0910C
Big Now Hay Bale Machine
Wood Chipping traktọ mejuputa WC-18/22
Now hay baler RXYK-0890
The Model 2500 ike ga-eji na traktọ maka 18-50hp 1 First itinye isi nzukọ a atọ mgbe ikedo. Mgbe wụnye tine ntuli aka, jide n'aka na biarin bụ n'ime rails na ala n'akụkụ nke hub.The tine ntuli jikọọ iji anọ bolts. 2 Jide n'aka na t ...
E nwere ụfọdụ ndị ihe na-eme n'ihu na-arụ ọrụ na mini gburugburu baler. 1 Gbakwunye baler ka a atọ mgbe ikedo. Nke a ga-ekwe ka ị na-ebuli na-akpali ndị baler mgbe n'ịrụ nzukọ. 2 Ị ga-mkpa iji weghachite akụkụ echekwara n'ime baler ogige. Iji weghachite na akụkụ, remo ...
Adress: Weifang obodo, Shandong n'ógbè, China